Akupu otu nwoke ihe na-ekwere ya egwu. - Ọmọ Oòduà
Home / Art / Ọmenala ndị Igbo / Akupu otu nwoke ihe na-ekwere ya egwu.
Akupu otu nwoke ihe na-ekwere ya egwu.
Posted by: princessnwude in Ọmenala ndị Igbo Comments Off on Akupu otu nwoke ihe na-ekwere ya egwu.
Otu nwoke ka a akupuru ihe na-ekwere ya egwu ma merucha ya ahu maka na a si na ya na nwunye mmadu kwara iko.
Otu onye no na uzo mgbasa ozi ogbara ohuru akporo Facebook aha ya bu Fortune Eshio Chaba, Onye bi na Legos sizi n’uzo di otu a wee kesaa foto nwoke ahu go siri anya ya zara aza di ojii obuna mgbe akusiri ya ihe.
Ha kupuru ya anya maka na ya na nwunye mmadu kwara iko! Si n’ebe nwunye ndi mmadu no Puo!
Ọmenala ndị Igbo	2018-01-31
Tagged with: Ọmenala ndị Igbo
Previous: Èsù Óólogbè!
Next: Syrian War Report – January 30, 2018: SDF Sends Reinforcements To Afrin
Igbo Political Leaders And Their Past Misadventures Resulting In Current National Political Problems
Onwa Febuwari Atuo!
Mahadum Obafemi Awolowo ebido ule nke simesita abuo ha.
Otu nwaagbogho agbahara nna ya obuna mgbe afo Iri abuo na asaa O gbaghapuru ya gachara.
Otu nwaagbogho no na ngalaba ikpeazu ya na Mahadum di na Imo Steeti aha ya bu Ogamba Angel Chiamaka, ka ekwuru na O dara n’ike ma nwukwazia. Nke a mere obuna mgbe ogbachitechere olu ikpeazu ya na Mahadum nke ndi bekee kporo (project defence) mgbe onwa November di na nkpuru ubochi Iri abuo na ano. Tutu O nwua O na- agu mbiakota onu na mmekorita otutu Ihe nke ndi bekee kpokwazi (chemistry). Ndi enyi ya na ndi ya na ya ...